Stats squared merie mmalite izu ụka | Martech Zone
Enweghị ndị meriri na Mbido izu ụka ebe a na Indianapolis. Ọ bụ ihe ịtụnanya nchịkọta nke echiche dị egwu - ọtụtụ n'ime ha ejirila ụfọdụ ụkpụrụ dị oke njọ mee ihe. Kudos na-aga Bọọlụ Lorraine maka iji otu aka jikọọ ihe omume a dị ịtụnanya - yana Purdue Research Park - ebe dị egwu iji jide ya. Onye mmeri bụ Stats squared, ngwá ọrụ maka nyochaa mmetụta Twitter nwere na saịtị gị site na ịkọ njikọ.
Nsogbu, nke m edere banyere, bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmahịa niile na-elelị okporo ụzọ na-ezo aka na ha na-enweta site na Twitter n'ihi na ha na-eleba anya na ngalaba na-ekwu maka Twitter.com. Twitter.com bụ naanị ihe dịka 18% nke okporo ụzọ Twitter niile.
E nwere ụfọdụ ihe ngwọta - dị ka tinye n'ọrụ mkpọsa Koodu mgbe shortening na-ekesa gị URL… ma na-arụ ọrụ naanị maka njikọ na ị kesaa. Ọzọ ngwọta bụ iji Bit.ly Pro… ọzọ, naanị atụ njikọ na ị kesaa. Bit.ly Enterprise-enye gị ohere inyocha ọ bụla nke URL gị dị mkpụmkpụ ebe ọ bụla na Bit.ly. Mana obughi onye obula ji Bit.ly.
Nwee ume… na-esote iji ngwá ọrụ dị ka Backtweets nke na-erute iru nke njikọ ọ bụla ị wepụtara ebe ahụ, mana ka enyeghị gị ọnụọgụ ọnụọgụ ọ bụla na ole nleta bịara na saịtị gị.
N'ezie, azịza zuru oke ga-abụ maka Twitter iji nye ndị azụmaahịa ohere ịgbakwunye koodu mkpọsa nke ha maka ngalaba nke ha nwere. N'ụzọ ahụ, oge obula njikọ nke onye ọ bụla tinyere na ngalaba gị, etinyere koodu mkpọsa na akpaghị aka yana niile nchịkọta ga-enwe ike ịdebanye ozi ahụ ebe nleta ahụ si. O doro anya na, Twitter na-eme nke a na ọtụtụ njikọ nke ya - dị ka ndị ha na-ekesa na ozi ịntanetị.
Ntọala squared na-atụ anya inyere aka belata ihe a und ma ọ dịkarịa ala site na ịlele mmetụta nke tweets gị na saịtị gị. Stats squared agwakọta gị Twitter iyi na Bit.ly iji nye stats azụ gị na saịtị. Ọ bụ ezie na ọ na-egosi na ọ na-arụ ọrụ na Bit.ly na ọ bụghị Bit.ly Pro… ie. URL anyị na-ebelata ka mkt.gs mana ọ pụtaghị ịdebanye aha.
Enwere m ndepụta ịchọrọ maka Ntọala squared:
Ogidi aka nri nke bu nchikota, inye otutu Tweets na onu ogugu ndi ozo (CTRs) site na ubochi, izu na ọnwa.
Ikike ịhụ ụzọ nkesa, site na nke mbụ tweet na ndị folks na-edegharị, na ugboro ole ejiri pịa njikọ ahụ.
Ikike nke ịhụ ndị fol RT ndị njikọ gị kachasị ma, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, okporo ụzọ ha na-ebuga gị.
Ọ bụ ihe ọ excitingụ ịnọ na kọmitii onye ọka ikpe nke mbido sitere na echiche ruo na ogbugbu n'otu izu ụka. Stats squared nwere ụfọdụ ụlọ nhicha-eme na ụfọdụ ndị ọzọ mmepe, ma ọ bụ oké ntọala ozugbo nke igbe. E debere ya nke ọma, na-adọrọ mmasị ma na-egosi na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.